Registry yeIntra-Nharaunda Vanoshanda muSpain | Ehupfumi Zvemari
Munyika yanhasi yepasi rose pane zvakawanda zviitiko zvebhizinesi zvinoitwa nekugadzira a Rejista yevanopindirana Vashandisi. Asi ndezvipi zvinyorwa zvakadaro? Muzviitiko zvipi zvinoitwa? Uye kubvunzana kweakataurwa mashandiro kunoitwa sei?
Muchinyorwa chinotevera tichapindura iyi mibvunzo kuitira kujekesa nepese panogona napo kusahadzika kunogona kumuka maererano ne marejista evashandisi venharaunda.
Ngatitange nekupa mhinduro nekukurumidza kumibvunzo mikuru inomuka maererano nemusoro wenyaya, kutanga Ndiani anofanira kunge ari mu rejista yekushandisirwa munharaunda?.. Mhinduro ndeyekuti: Makambani eSpain kana ma freelancers anoshanda neEurope. Mubvunzo wechipiri ungave kuti marekodhi aya anogadzirwa riini? Paunoita chero bhizinesi rekunze kunze kweSpain, izvi zvinoreva kuti une vatengesi kana vatengi kunze kwenyika.
Chinhu chinotevera kujekesa chero munhu ane hupfumi kunze kweSpain anofanirwa kutevedzera zvimwe mitero yemitero. Ipapo ndipo pane kukosha kwenyaya iyi, mune ese maitiro ehutongi anofanirwa kuitwa uye mune zvemari mabasa atinozotsanangudza pazasi.
1 Chii uye nzira yekuwana yedu NIF - VAT
2 Ita nzira yekuwana iyo NIF - VAT
3 3 mikana paunenge uri mune rejista yevanopinda-munharaunda vanoshanda
4 Chechipiri manejimendi maitiro: mharidzo yefomu 349
5 Mibvunzo kubva kunevanopinda-munharaunda vashandisi
6 Kuzviongorora wega kuzvinyoresa kwevanopinda-munharaunda vanoshanda
Chii uye nzira yekuwana yedu NIF - VAT
Maitiro atinozoiswa mukati meiyo registry yevanopinda-munharaunda vanoshanda muSpain. Musoro wechipiri watichataura nezvake uchave wekuratidzwa kwemuenzaniso 349. Gare gare isu tichabata nemisoro yemhando dzemhando dzekubvunzana mukati-munharaunda vashandisi uye maitiro ekubvunza akadaro.
Ita nzira yekuwana iyo NIF - VAT
Imwe yei kutanga zvinodiwa kuitira kuti semakambani kana vanhu isu tigone kutenga kana kutengesa zvigadzirwa uye masevhisi anouya kubva munyika iri mukati meEuropean Union ave neNIF - VAT; panguva ino zvakakosha kujekesa kuti iyo NIF inoenderana neDNI yedu kushandisa "ES" pakutanga, kujekesa kuti iri ChiSpanish intra-munharaunda mushandi.
Tinofanira kupa maitiro pamberi peHaimari, uyo watichakumbira kunyoresa mukati me Rejista yevanopindirana Vashandisi. Kuita izvi kunyoreswa kunotibvumidza kunyoreswa semunhu anozvishandira kana kambani ichaita kutengesa kana kutenga kubva kune mumwe munhu ari kunze kweSpain, chero bedzi iri mukati meEuropean Union.
Maitiro atinotanga maitiro aya nekutumira a modzo 036 .
Mushure mekutumira kunyorera kwedu kunyoreswa, Treasure inotipa mhinduro yakanyorwa, inoratidza kuti tinogamuchirwa kana kwete mukati-munharaunda vashandisi. Chinhu chakasarudzika ndechekuti mhinduro inosimbisa. Kamwe kugamuchirwa kwechikumbiro chedu kwasimbiswa, tichava mukati me Rejista yevanopindirana Vashandisi.
Izvo zvakakosha kujekesa, pazasi, ndeapi mikana yese iri kunyoreswa mu Rejista yevanopindirana Vashandisi.
3 mikana kana uri mu Rejista yevanopindirana Vashandisi
Iko kwekutanga mukana, uye chimwe chezvakanyanya kukosha, kuve mukati me VIES system. Sisitimu yeMari iyi inotipa simba rekudzora vatinoshamwaridzana navo, nekuziva kana mutengesi kana mutengi wedu achigoneswa kuita zviitiko zvehupfumi pakati penyika dzakasiyana.
Bhenefiti iyi ichatibvumidza isu kuve nekutonga kwakakura pane kwedu hupfumi zviitiko kunze kweSpain, nekuti kana tichiita bhizinesi nema freelancers kana makambani akanyoresa mukati VIES system, kuregererwa kweVAT kunogona kuitwa izvo zviripo mukati medu invoice. Kugadzira mhedzisiro yehupfumi neyehupfumi zvakanyanya kuve zvakanaka uye zvakapusa.
Chechipiri mukana wekuti kuve mukati meiyi registry kunotipa iko kuzadzikiswa kweinvoice kune vedu vekuEurope vatengi, mavovhoisi anozoenda pasina VAT, chikonzero cheichi ndechekuti kutengesa kuri mukati-munharaunda hakuendi neVAT kubva kuSpain, zvinopesana , Vachanyoreswa neVAT yenyika iyo akanyoreswa mutengi.
Izvo zviri pamusoro zvakapfupikiswa muchokwadi chekuti, kana yedu inivhoyisi ndeyemutengi ari zvakare mu Nyoresa kweanopindirana Vashandisi, kune mutengesi, iko kutengesa ibasa risingabhadharwe VAT
Mumwe mukana wekuti kunyoreswa muchirongwa ichi kunotipa kugona kugamuchira maInvoice kubva kune vatinopa muEuropean Union. Chinhu chikuru chakanakira izvi ndechekuti zvigadzirwa zvichave zvakachipa nekutiponesa VAT.
Pano mubvunzo unotevera ungamuka:Kana ndisina kunyoreswa muVIES system Unogona kutenga kana kutengesa zvigadzirwa muEuropean Union. Uye mhinduro ndeyekuti, kana zvichibvira, zvakadaro, kufamba kwese kuchaitwa neVAT yenyika inoenderana, saka zviitiko zvacho zvinodhura.
Chechipiri manejimendi maitiro: mharidzo yefomu 349
Muenzaniso 349 Iyo fomati iyo inozivisa inoitwa yekutenga kwese nekutengesa kwakaitwa kunze kweSpain, kumutengi kana mutengesi mukati meEuropean Union. Mune fomu iri tichawana pfupiso yemabasa edu emunharaunda.
Izvo zvakakosha kuti utaure kuti fomati iyi yakakosha kwazvo pamutero wekudzoka, uye kana ukasarudza kusaendesa fomu yakataurwa, unogona kukodzera kupihwa chirango kubva kuimba yacho. Uye zvakare, kuhupa kunotipa mukana wekuti tikwanise kusiyanisa zviitiko zvese zvatingaite uye nenzira iyi tinogona kuita sarudzo mune ramangwana nezvekambani yedu.
Mune fomu iri iwe unowana ese edu mashandisirwo akaitwa zvese zvemuno uye izvo zvakaitwa nemutengi kana mutengesi weEuropean Union. Uye kuisa iyo kunoita kuti kubhadhara mutero kuve nyore.
Mibvunzo kubva kunevanopinda-munharaunda vashandisi
Chinhu chakakosha kwazvo kuyeuka ndechekuti isu tinogona kuzviita mimwe mibvunzo kune iyo VIES system, izvi kuitira kuti tive neruzivo rwakakwana kuti tikwanise kuita sarudzo dzakanangana nezvekambani yedu kana zviitiko zvedu zvehupfumi hwedunhu.
Tichatanga kuongorora mubvunzo wevanopinda-munharaunda vanoshanda muSpain. Kuti tiite mubvunzo uyu, ruzivo rwatinofanirwa kuve narwo - NIF - VAT yeanoshanda munharaunda. Kana tangove neruzivo urwu tinokwanisa kuwana iyo VIES system uye tinopinda iyo NIF. Chinangwa chemubvunzo uyu kugona kuona kuti wakanyoreswa muchirongwa. Mubvunzo uyu unowanzo shandiswa nemakambani kana ma freelancers kubva kune dzimwe nyika dzeEuropean Union vanoda kuona kuti mutengesi kana mutengi akanyoreswa mukati meiyi system.
Mumwe mubvunzo unogona kuitwa ndewe iyo intra-munharaunda vashandisi vasiri veSpanish. Kuti tiite mubvunzo uyu, ruzivo runodiwa ndiNIF - VAT uye chitupa chemagetsi, isu tichafanirwa kusarudza kodhi yenyika (mavara maviri ekutanga eNIF - VAT)
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti uyu mubvunzo unoitwa zvakananga muhurongwa hwenyika iyo iyo kodhi yakapinda inowirirana. Kamwe kana mubvunzo waitwa, iyo skrini ichatiratidza meseji inoratidza kuti iyo mutero agency inosimbisa kuti iyo NIF - VAT iri kana isingaoneke se intracommunity opareta.
Kuita iyi kubvunza pakusarudza vatengesi vedu kunonyanya kubatsira, nekuti inotipa zvakati wandei mutero. Uye zvakare ichatibvumidza isu kuve netsiva iri nani pamusoro pezviitiko zvedu nevatengi vedu kana vatengesi mukati meEuropean Union.
Kuzvionera wega Rejista yevanopindirana Vashandisi
Yekupedzisira kubvunza yatichazobata nayo iko kuzviongorora, ndiko kuti, isu pachedu tinoda kutarisa chimiro chedu mukati meiyo VIES system. Kuti tiite kubvunzana uku tinoda yedu NIF - VAT uyezve chitambi chemagetsi kubva kune anenge achikumbira. Mubvunzo uyu unowanzoitwa kuitira kuongorora mamiriro edu mukati mechirongwa.
Panguva yekuita mubvunzo, tinofanirwa kuisa nhamba yeVAT mubhokisi rakagadzirirwa izvi, uye meseji inoburitsa ichave ruzivo rwedu umo zvinoratidzwa kuti mutero agency ine nhamba yedu seinoshanda munharaunda.
Ruzivo urwu runogona zvakare kushandiswa kuzviratidza pachedu se freelancer kana kambani yakagadzirira kuti ikwanise kuburitsa kana kugamuchira ma invoice mukati meiyo tax tax. Uye zvichatibvumidza kuwana mikana iri nani yebhizinesi
Kunyangwe iko kutumirwa kwemavovovo edu mukati Rejista yevanopindirana Vashandisi Haisi nyaya iri nyore kuita, chokwadi ndechekuti zvakafanira kutarisisa kuitira kuti ukwanise kuve nechokwadi chezvinhu zviviri, mashandisiro akareruka nevamwe vanoshanda mukati meEuropean Union, uye chepiri, mutero wakaringana kudzoka uchipesana nechuma. .
Imwe yemazano akakodzera kutarisisa ndeyekushandisa software yakasarudzika mukuzadziswa kwema invoice, nenzira iyi tichakwanisa kudzivirira zvikanganiso zvingangoitika mukuteresa kwedu uye zvichatibvumidza kudzora accounting yedu mune yakapusa nzira, pamusoro pekuburitsa zvakwakanakira nekutibvumidza kutarisa kukura kwekambani yedu, tichiita zvisarudzo zvichibva pakuwongorora kweruzivo rwunoratidzwa musoftware.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvematongerwo enyika » Mutemo wezvemari » Registry yeIntra-Nharaunda Vanoshanda muSpain
Sarudzo yeDare Repamusorosoro inobata sei mogeji?